Nokia 5.2, 6.2 na 7.2 ga - ewepụta na IFA 2019 | Gam akporosis
Edere Ferreno | | IFA, Mobiles
Fewbọchị ole na ole gara aga e gosipụtara na Nokia ga-abụ otu n’ime ụdị ndị ga-adị na IFA 2019, ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kpọsara ya na netwọk mmekọrịta ya. Ya mere, ha ga-abụ otu n'ime ihe omume kachasị mmasị nan mbipụta nke afọ a. Amaara na ụlọ ọrụ a ga-ahapụrụ anyị ọtụtụ ekwentị na mmemme a, agbanyeghị na-ekwubeghị nke ha bụ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ekwuolarị ụdị atọ dị iche iche, dị ka o doro anya na anyị ga-ezute na nkwupụta a na IFA 2019. Ndị a bụ Nokia 5.2, 6.2 na 7.2, ekwentị atọ anyị na-ege ntị asịrị dị iche iche maka izu ole na ole ugbu a, ha ga-erute n'etiti. nke ika.
Ndi a bu ekwentị ato ndi Nokia doro anya na ha gha eme na mmemme a. Ọ bụ ezie na e nwere ndị mgbasa ozi na-atụ aro na anyị nwere ike ịtụ anya ma ọ dịkarịa ala ngwaọrụ atọ ọzọ, ma ọ na-eche na atọ ndị ọzọ a ga-adị mfe ekwentị. Anyị enweghị nkwenye gọọmentị 100% ọ bụla rue na nke a.
Ihe dị ka 7.2 enweela ụfọdụ mkpọpu mmiri, n’oge na-adịbeghị anya anyị enweela ike ịhụ atụmatụ ya ma mara ụfọdụ nkọwa ya. Ọ bụ ezie na kwa ihe dịka 5.2 na 6.2 enweela ọtụtụ asịrị n'izu ndị a. N'okwu atọ a, ha ga-abụrịrị ụdị nke ga-erute n'etiti etiti nke onye nrụpụta.
Ya mere o yiri ka Nokia ga-ahapụ anyị ọtụtụ akụkọ na IFA 2019. Ebe ọ bụ na ọ dị ka ekwentị isii na ngụkọta ga-ekpughere. Mmemme dịka nke ha mere na MWC, ebe ha hapụkwara anyị ụdị ekwentị niile. O yiri ka ha ga-ekwughachi atụmatụ na nke a.
Anyị nwere ihe dị ka izu atọ ruo mgbe ihe a ga-eme. O kwere omume na enwere ọgbaghara na ekwentị n'oge a, ya mere anyị ga-amatakwu banyere ha. Anyị ga-ege ntị na ozi ọ bụla gbasara ụdị ekwentị Nokia ọhụrụ a. O doro anya na ika ahụ ga-abụ otu n’ime ihe dị mkpa na IFA.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ekwuru na Nokia 5.2, 6.2 na 7.2 na IFA 2019